Toerana tranokala Danoa Online - Kaody Bonus Bonus amin'ny Internet
(655 vato, average: 4.00 avy tany 5)
Loading ...Nanomboka tamin'ny 1948, tany Danemark dia nisy ampihimamba iray teo amin'ny sehatry ny filokana, izay fananan'ny orinasam-panjakana nantsoina hoe Danske Spil. Tsy mahagaga raha niroborobo ny firoboroboan'ny filokana ambanin'ny tany, saingy tamin'ny 1990 tany Danemark dia nisy ny fananganana ara-dalàna ny casino. Na dia mitazona ampihimamba ihany aza i Danske Spil amin'ny loteria sy hazakaza-tsoavaly, hazakazaka greyhound ary hazakazaka voromailala, dia nanjary natokana ho an'ny orinasa tsy miankina ny fandaminana filokana vidiv hafa, saingy misy fetrany ihany: ny orinasa vahiny dia afaka manokatra casino eto amin'ny firenena mba hamoronana mitambatra orinasa miaraka amin'ny mpiara-miasa Danoa, ohatra, ny tompona trano.
Mariho ho an'ireo mpitsidika ny lahatahiry filokana amin'ny Internet fa hatramin'izao, ny karazana filokana rehetra any Danemark dia heverina ho ara-dalàna. Ny lalàna mifehy ny filokana any Danemark dia nametraka ny lalàna rehetra amin'ny fiasan'ny tsenan'i Danemark filokana. Araha-maso ny fampiharana an'io lalàna io, ary koa mifandraika amin'ny olan'ny fahazoan-dàlana amin'ny filokana The Gambling Gambling (Spillemyndigheden).
Gambling amin'ny Internet ao Danemark
Ny 1 Janoary 2012 dia fiovana lehibe teo amin'ny tantaran'ny filokana an-tserasera any Danemark. Nanomboka tamin'io andro io dia nisy lalàna vaovao mifehy ny filokana ao amin'ny firenena. Na eo aza ny fihazonan'ny Danske Spil ampihimamba ampahany amin'ny karazana filokana sasany, ny orinasa tsy miankina sy ny olon-tsotra dia lasa tranokala fahazoan-dàlana amin'ny Internet, any Danemark, indrindra ny filokana amin'ny Internet amin'ny tranokalan'ny fanatanjahantena sy ny tranokala an-tserasera. Araka ny lalàna mifehy ny filokana amin'ny Internet any Danemark, amin'ny mpandraharaha vahiny filokana dia afaka manome serivisy amin'ny filokana an-tserasera ao amin'ny firenena, mila maka fitsapana izy ary mahazo fahazoan-dàlana any Danemark, ary koa mandoa sarany.
Efa tamin'ny taona voalohany nidiran'ny fahazoan-dàlana ho an'ny fahazoan-dàlana vaovao nahazo mpamatsy vola an-tserasera 25, ao anatin'izany ny sasany amin'ireo mpandraharaha iraisam-pirenena toa an'i 888, Bwin ary Ladbrokes. Mandritra izany fotoana izany, ny governemanta dia mirotsaka an-tsehatra amin'ny ady amin'ireo tranonkala filokana an-tserasera tsy misy fahazoan-dàlana any Danemark, izay tafiditra anaty lisitra mainty sy voasakana.
Lisitry ny Top Tenan'i 10 Danish Online
Ny filokana ao Danemarka
Tenimiafina Skandinavia nantsoina hoe ny perla dia tsy izao fotsiny: faritra kely amin'ny firenena ny isan'ny harena voajanahary sy ara-tantara mihodinkodina fotsiny. Ny SasinoToplists dia milaza aminao ny momba ny toetra mampiavaka an'i Danemarka, ary koa ny fihetsiky ny Danes amin'ny filokana.
Danemarka - jeografia kely sy tantara;
Ireo kazina ao an-toerana ao amin'ny firenena amin'izao fotoana izao:
Ny orinasa vahiny dia tsy maintsy manana orkesitra ao an-toerana amin'ny fananganana lalao filokana;
Ny tapakila fidirana amin'ny casino.
Ny firenena enina kilasy dia ao Aalborg, Orhusskae, Clamps, Odense, Helsingor ary, mazava ho azy, ao an-drenivohitr'i Copenhagen;
Efatra dimy tao Copenhague renivohitr'i Danemark tamin'ny adiresy;
Zavatra mahaliana momba an'i Danemark sy Danes.
Toerana misy an'i Danemarka ary misy famaritana ara-tantara kely
Denmark dia nantsoina hoe Fanjakan'i Danemark dia marina. Izy io dia firenena any Eropa Avaratra ary farany atsimo amin'ireo firenena Skandinavia. Ny firenena dia miorina eo amin'ny saikinosy Jutlanda sy amin'ireo nosy kelin'ny nosy, ary ao koa ny Nosy Faroe sy Greenland.
I Danemark dia nijanona ho mpanjaka nanjakan'ny lalàm-panorenana hatreto, ary tokony homarihina tamin'ny fotoana naha fanjakana matanjaka azy io firenena io - hatramin'ny taonjato faha-19 ireo mpanjaka danoà "nitazona totohondriny", dia i Eropa Avaratra iray manontolo. Ankehitriny ny Nosy Faroe sy Greenland dia manana fahaleovan-tena ambony sy fitantanana tena. Hatramin'ny 1972, ny danoà no nitondra ny mpanjakavavy faha-54 antsoina hoe Margrethe II.
Casinos sy ny filokana ao Danemark
Ny fanaovana ara-dalàna ny filokana ao amin'ny firenena dia nitranga tamin'ny taona 1990 ary ao no mametraka ny fitsipiky ny fahazoan-dàlana ho an'ireo mpandraharaha vahiny. Ny fepetra lehibe amin'ny famoahana fahazoan-dàlana - mpandraharaha vahiny misahana ny asa filokana dia ny mamorona orinasa Danoa miaraka amin'ny orinasa Danoa efa misy. Ny fomba mety indrindra hamoronana fiaraha-miasa toy izany eo am-pototry ny trano fandraisam-bahiny, izay no nitranga.
Ny fanajana tanteraka ny lafiny Danoa dia ny mpandraharaha toy ny "Holland Casino" avy any Netherlands mifanila aminy, "Bad Neuenahr" avy any Alemana, "Casinos Austria" avy any Austria. Ny tahan'ny hetra any amin'ny fanjakana dia avo, miankina amin'ny tombony azon'ny casino izay manomboka amin'ny 45% amin'ny fihodinana isan-taona.
Amin'izao fotoana izao dia manana trano filokana 6 lehibe ny firenena. Any Aalborg, Orhusskae, Clamps, Odense, Helsingor no misy azy ireo ary, mazava ho azy, any Copenhagen renivohitra.
Casino Copenhagen. Ny lalàna iraisana ao amin'ny casino dia mifanena amin'ny trano filokana eropeana manomboka amin'ny 14.00 ary mifarana amin'ny 4.00. Ny fitsidihana ny casino dia mety amin'ny faha-18 taonany ihany, noho izany dia mila manana pasipaoro ianao.
Nuansa iray hafa - eo am-baravarana dia angatahina ianao handoa ny saram-pidirana. Ny tapakila isan'andro dia mitentina 95 kroner danoà (eo amin'ny 12 € eo ho eo), herinandro - 265, ary amin'ny taona 2.095 DKK. Amin'ny fahavaratra dia afaka mitsidika ny trano filokana amin'ny kilaoty fohy sy paoketra ianao, fa ny akanjo fanatanjahan-tena eto dia tsy raisina.
Rehefa tsy tokony hanao solomaso ny lalao poker ao anaty casino dia ampiasao ny iPod sy manao t-shirt tsy misy tanany. Saingy mandritra ny andian-dahatsary manerantany toa ny WPT sy ireo fitsipiky ny fifaninanana lehibe momba ny fisehoan'ny demokratika iray kokoa.
Amin'ny ankapobeny, ny trano filokana ao Copenhagen dia malaza be ary be fangatahana. Izy io dia manana ny zava-drehetra izay tsy maniry afa-tsy ny fanahin'ny mpiloka iray: Roulette (Eoropeana sy Amerikanina), karazana milina slot (safidy 140), latabatra ho an'ny poker, blackjack ary Punto of Banco.
Ankoatra ny mandeha an-tongotra any afovoan-tanàna miaraka amin'ny toeram-pitsaboana nentim-paharazana, faritra akaiky, ary ny tsangambato ho an'ny Little Mermaid, i Copenhagen dia nanatrika fitsangatsanganana sy fanatobiana tsy manam-paharoa.
mozea «Minoa fa sa tsy izany!». Address: ny R å dhuspladsen , 57. Ao amin'ity tranombakoka tsy mahazatra ity eo ambanin'ny famantarana mahaliana hoe "Minoa azy na aza mino azy!" Fanangonana Leroy Ripley - mpandeha sy mpanangom-bokatra. Nandritra ny taona maro, dia an-jatony ny dia eran'izao tontolo izao nanangona zavatra mahatalanjona maro. Eto no hahitanao ny lalao amin'ny Taj Mahal, ny taolan'ny mammoth, harpa, milalao tsy misy tadiny ary na ny ranomasina aza dia mahatsikaiky fotsiny.
Tranombakoka "Experimentarium". Adiresy: Tuborg Havnevej, 7 taona, Hellerup. Raha miara-dia amin'ny ankizy ianao na te hahatakatra ireo lalàna ara-batana mitovy ihany - io no toerana mety indrindra. Misy milina polygraph hiantsoana rivo-doza sy horohoron-tany, ary zavatra manintona maro hafa. Azo kitihina ny fampirantiana rehetra.
Museum "Guinness". Adiresy: Østergade 16. Tsy mila fampidirana ity tranombakoka ity, satria ny Guinness dia mirakitra momba izay fantatry ny rehetra. Fa rehefa mamaky ny rakitsoratra rehetra fotsiny ianao dia sarotra be indraindray ny maka sary an-tsaina. Eto ianao dia afaka mahita fampirantiana maherin'ny 500 amin'ireo rakitsoratra mahaliana indrindra, sy ilay «fampirantiana Mystic Exploratorie » Afaka mihazona ny alokao ianao, miampita ny lohanao miaraka amin'ny olona mpanatrika, ary aza mipetraka ao amin'ny seza elektrika.
Park "Tivoli" fialamboly. Adiresy: Vesterbrogade 3. Ity valan-javaboary fialamboly ity no zokiny indrindra eto an-tany ary, teny an-dàlana, nanome aingam-panahy an'i Walt Disney indray mandeha izy hamorona tambajotra Disneyland. Tsy misy manintona supernavorochennogo, fa misy ny rivo-piainana mahafinaritra sy mahafinaritra tokoa.
Tranombakoka "Erotica". Adiresy: Kobmagergade 24. Ity no tranombakoka erotika voalohany eran'izao tontolo izao, niseho tamin'ny taona 1992. Eto ianao dia afaka mamantatra ny tantaran'ny fihetsika manoloana ny erotika hatramin'ny andro taloha tany Roma sy India ka mandraka ankehitriny. Misy sary hoso-doko, sary sokitra, sary ary horonan-tsary, ary koa fitafiana erotika sy karazana fitaovana rehetra avy amin'ny lalana sadomasochistic. Midira noho ny antony mazava, miaraka amin'ny 18 taona, fa ny mpianatra manana fihenam-bidy 50%.
Zavatra mahaliana momba an'i Danemark sy Danes
Manomboka aloha be ny andro fiasana - vao maraina tamin'ny 8 maraina dia mandeha miasa ny Danes ary amin'ny 16.00 dia afaka. Nikatona aloha be ihany koa ireo magazay, ka nataon'ireo Danes ny vokatra lehibe novidiana tamin'ny faran'ny herinandro;
Manana hetra avo dia avo i Danemark - salan'isa 43%. Miankina amin'ny haavon'ny karaman'ny olom-pirenena sy ny tombony azo avy aminy;
Any am-piasana dia mahazo sakafo telo isan'andro ny Dane rehetra. Ny fampielezan-kevitra danoà, na orinasa na fikambanana dia manana efitrano fisakafoanana sy mpahandro manokana;
Lehilahy danoà manao asa ao an-trano mitovy amin'ny vehivavy. Manasa ny gorodona izy ireo, mikarakara ny ankizy ary tsy mampaninona azy ireo ny mahandro zavatra matsiro.
Ny trano any Danemark dia somary lafo ary matetika tsy dia tsara kalitao. Ny fiolahana amin'ny rindrina, ary indraindray tsy ny drafitra tsara indrindra no atao ao amin'ny ankamaroan'ny trano.
Any Danemarka, fitsaboana ara-pahasalamana maimaim-poana, miaraka amin'izay koa amin'ny dokotera isan-tokantrano dia misy marary maromaro. Atao amin'ny faritry ny faritany izany, ary raha handeha ianao, dia tsy maintsy miova ny dokotera;
Danemark - Firenena bisikileta. Tena tiana sy ankamamiana izy ireo.
Danemark eo amin'ny sarintanin'i Eoropa
Lalao filokana any Danemark
Amin'ny ohatry ny Danemark dia hitanao ny làlana tokony harahina, raha ny hamorona indostrian'ny filokana tena manintona no lahasa. Ny Danes, na dia somary milamina aza ny toetrany, dia tsy mampaninona azy ny mandany fotoana amin'ny filokana, ary amin'izany dia manana ny fotoana rehetra ananany izy ireo.
Tsy afaka milaza isika raha ny casino any Danemark amin'ny dingana rehetra dia tsy izany. Tsy manana afa-tsy mpandraharaha 7 izay mandrindra fahazoan-dàlana ny firenena, ary fangatahana roa no miandry. Na izany aza, na ny casino aza, izany hoe, ampy hanomezana fahafaham-po ny safidin'ny Danes filokana. Etsy andaniny, any Danemark dia misy olona 5 tapitrisa eo ho eo, ary kasino 7 no zara raha mahazaka ny fitsofohan'ny mpitsidika. Ary raha tsara vintana ianao mitsidika ity firenena mahafinaritra ity dia aza hadino ny mitsidika ny iray amin'ireo casino. Ireo trano filokana dia matetika hita ao amin'ny telovolana manan-tantara, ny trano fandraisam-bahiny, ary mahaliana na dia ny mitsidika fotsiny aza.
Ao Aarhus, tanàna faharoa lehibe indrindra any Danemark, dia miasa amin'ny iray amin'ireo casino Danoa tsara tarehy indrindra. Tsy noho ny atitany kanto fotsiny no ahafantarana azy, fa koa amin'ny kalitaon'ny serivisy. Ity trano ity dia hita ihany koa ary hotely fandraisam-bahiny Hotel Royal, izay te-hijanona ho olo-malaza sy mpanankarena. Ao amin'ny faritry ny hotely dia misy toerana maro manan-tantara. Misy koa ny fanta-daza ary ny Latin Quarter miaraka amin'ireo kafe sy fivarotana renirano ao aminy.
Raha ny amin'ireo lalao misy ao amin'ny casino dia misy latabatra vitsivitsy hilokana amin'ny sangisangy amin'ny roulette, blackjack ary poker. Ao amin'ny efitrano dia afaka mahita milina kilasy 80 voalohany ianao. Matetika ny rindrin'ny casino dia mitarika fifaninanana poker lehibe.
Ny Danemarka manintona, ny zava-misy fa ny tanàna tsirairay ao aminy, ary tsy ny renivohitra ihany, no mahaliana ny mpizahatany. Mety hisy hieritreritra fa any Copenhagen no misy ny trano filokana rehetra, saingy tsy izany. Iray amin'ireo filokana mahafinaritra indrindra miasa amin'ny tanànan'ny Aalborg. Ny filokana tsy ilaina ao amin'ny trano fandraisam-bahiny amin'ny afovoan-tanàna sy ny manodidina dia feno fiainana foana. Klioba maro, trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana kely no tsy ho mankaleo mpankafy fiainana andavanandro. Ao amin'ny casino ianao dia afaka milalao karazana roulette, poker ary lalao karatra maro hafa. Hita ihany koa amin'ny slot 30 mahery, ao anatin'izany ny jackpot mandroso.
Na izany aza, ny casino lehibe indrindra any Danemark no misy ao an-drenivohitra. Nisokatra tamin'ny taona 1990 izy io tamin'ny alin'ny Taom-baovao ary io no fananganana filokana ara-dalàna voalohany eto amin'ny firenena. Raha mila safidy fialamboly farany ambony ianao, dia mila mitady azy any Copenhagen. Latabatra kilalao am-polony maro amina am-polony maro sy slot mihoatra ny zato no mamela ny hahita lalao araka ny itiavanao azy. Raha ny fanazavana, ny hetsika poker lehibe indrindra dia matetika voalamina ao anatin'ny rindrin'ity andrim-panjakana ity. Casino dia ao amin'ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny tsara indrindra Radisson Blu Scandinavia renivohitra.
Lalao an-tserasera amin'ny aterineto any Danemark
Ireo valim-pikarohana ireo dia azo hazavaina amin'ny hoe ny mponina Danoa dia fohy kokoa ny ora fiasana, nefa, na izany aza, ny antonony ny vola miditra - ny avo indrindra eto an-tany.
Toy ny fehezanteny iray ho an'ny fahombiazana (raha misy izy), fa ny Danes kosa tsy nandany ny fotoana malalaka nanangonany ny Lego.
Ireo olona ambony fidiram-bola eto amin'ity firenena ity dia mandray anjara amin'ny fampiroboroboana ny lazan'ny filokana an-tserasera.
Talohan'ny 1 Janoary 2012, ny an'ny fanjakana dia Danske Spil no tompon'ny fahazoan-dàlana ho an'ny fikambanana ary mitondra ny taha. Ny sisa amin'ireo orinasa Danoa sy vahiny dia tsy nahazo nanolotra fialamboly filokana sy filokana ara-panatanjahantena. Saingy noterena ny governemanta eo an-toerana hanova ity raharaham-pirenena ity, satria tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny lalàna, ary tranokala fanatanjahantena maherin'ny 400 no miloka haka filokana avy amin'ny Danes. Loharanom-pahalalana maro aza no atolotra ny teny danoà mba hanamorana ny fizotran'ny filokana.
Ny lalàna vaovao dia mamela ny hanome ny serivisy ho an'ny orinasa toa an'i Ladbrokes sy ny bet365, na dia mitazona ny ampihimamba amin'ny filokana amin'ny hazakazaka biby sy filokana aza ny fanjakana, izay mifototra amin'ny vintana madio. Enti-milaza ny lalao toy ny karatra fikororohana sy ny bingo, izay tsy ampiasain'ny mpilalao paikady na fahaiza-manao ary miankina amin'ny fotoana fotsiny.
Na eo aza ny fahaverezan'ny zon'ny irery handamina sy hitarika ny orinasa filokana Danske Spil dia nitombo be taorian'ny niova ny lalàna, ary mizara roa izy izao: Danske Lotteri Spil sy Danske Licens Spil. Ity farany dia manarona ny sehatry ny filalaovana an-tserasera ary vao tsy ela akory izay dia nandrakitra fitomboan'ny vola miditra 60% raha oharina tamin'ny taon-dasa.
Androany, manana fotoana betsaka amin'ny filokana ny Danes. Afaka milalao lalao toy ny poker an-tserasera amin'ireo mpilalao hafa manerantany izy ireo. Saingy ny governemanta Danoa dia mihatra am-pahibemaso amin'ireo orinasa fanaovana doka sy fahazoan-dàlana any ivelany izay fehezin'ny lalàna henjana.
Tahaka ny ankamaroan'ny eropeana, ny Danes dia tia baolina kitra ary mametraka ny ekipa Super League ao an-toerana betsaka. Ny English Premier League dia malaza be ihany koa satria matetika izy io dia aseho amin'ny satelita satelita (Danes dia afaka mahita lalao 280 amin'ny 380 isaky ny vanim-potoana).
Vao haingana, nitombo ny fahalianany tamin'ny golf, indrindra noho ny fahombiazan'i Thomas Bern. Ilay mpilalao tanora Torbjörn Olesen, raha ny fahitana azy, dia handray anjara amin'ny fahalianan'ny mpankafy. Nahazo fahombiazana maharitra ny handball sy ny badminton, niaraka tamin'ny mpitaingina bisikileta eran-tany nahazo loka tamin'ny hazakazaka bisikileta "Tour de France".
Ny Danes koa dia nandevozin'ny poker. Ny lazan'ny poker an-tserasera dia nanomboka nitombo haingana taorian'ny fandresena tamin'ny fiadiana ny tompon-daka tamin'ny poker Gus Hansen tamin'ny fiandohan'ny taona 2000. Any Danemarka, mpilalao poker matihanina marobe, laharana faha-25 ny firenena eo amin'ny laharana WSOP manerantany. Ny Gambling Community Denmark dia aleony ireo tranonkala poker voasedra ara-potoana toy ny Party Poker.
Ny ho avin'ny filokana any Danemark
Ny filokana tany Danemark dia nanomboka nivelatra haingana taorian'ny fampidirana lalàna vaovao tamin'ny vola lasa tamin'ny volan'ny sehatry ny filokana hatramin'ny 4 lavitrisa DKK.
Na izany aza, manao ny fomba rehetra ny governemanta mba hisorohana ny tranonkala filokana vahiny tsy misy fahazoan-dàlana manome serivisy ho an'ny Danes. Izany dia nahatonga ny zava-misy fa tamin'ny 2012 ihany, tranonkala 57 no voarakitra ao anaty lisitra mainty.
Tsy mahagaga raha, taorian'ny am-polony am-polony monja ny filokana ao Danemarka, ny orinasa Danske Spil dia mbola manana 62% amin'ny tsena. Mety maharitra fotoana fohy vao hahafahan'ny mpilalao hafa mifaninana amin'ilay mpanao boky, izay ampiasaina amin'ny fampiasana ny ankamaroan'ny mponina Danoa ny serivisiny.
0.1 Gambling amin'ny Internet ao Danemark
0.2 Lisitry ny Top Tenan'i 10 Danish Online
3 Ny filokana ao Danemarka
3.0.1 Toerana misy an'i Danemarka ary misy famaritana ara-tantara kely
3.1 Casinos sy ny filokana ao Danemark
3.1.1 Copenhagen attractions
3.1.2 Zavatra mahaliana momba an'i Danemark sy Danes
3.1.3 Danemark eo amin'ny sarintanin'i Eoropa
4 Lalao filokana any Danemark
5 Lalao an-tserasera amin'ny aterineto any Danemark
5.0.2 Tsena malaza
5.0.3 Ny ho avin'ny filokana any Danemark
milalao lotto milalao 3